Breaking News > Somali NewsNisa oo sheegtey in ay isbedel ku sameysay Saraak...
Trending 1 - Trending 2 - Trending 3 - Trending 4 - Trending 5 - Trending 6 Nisa oo sheegtey in ay isbedel ku sameysay Saraakiisha Baarista u Qaabilsaneyd. Ciidamo dheeraad ah oo la geeyay Garoonka Diyaaradaha Kismaayo Booliiska Soomaaliya oo loogu deeqey Qalab Ciidan. Saraakiil Soomaaliyeed oo Tababar loogu soo gabagabeeyay Suudaan. Daalibaan oo Hogaamiye Cusub ku dhowaaqdey, kadib markii uu geeriyoodey.. English News
The delegations from Somali clans in Somalia, Djibouti, Ethiopia and Kenya are attending the More... by Haruun Macalin | Published 7 hours ago
Booliiska Soomaaliya oo loogu deeqey Qalab Ciidan.
Dowlada Talyaanigan ayaa qalab ciidan waxa ay ugu deeqday ciidamada booliska Soomaaliyeed kadib munaasabad kooban oo...